Uncategorized – စာမျက်နှာ 30 – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized (စာမျက်နှာ 30)
ဒို, ဒိုင်လူကြီး, နှင့်အခြားအားကစားများအရာရှိကြီးများကယောဘဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့ Duty Template ကို
အားကစားမှာ Officiate သို့မဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့အားကစား. စည်းမျဉ်းများ infractions အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ထူထောင်စည်းမျဉ်း accordingto ပြစ်ဒဏ်များကိုရှေးခယျြ. ဒိုင်လူကြီးထည့်သွင်း, အားလုံးအားကစားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, နှင့်အတိုက်အခံတရားသူကြီးတွေ. Career Skills Requirement Officiate at sporting tournaments, လှုပ်ရှားမှုများ, သို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များ, စေ့စေ့အချို့ကြောင့်ဂိမ်းစည်းမျဉ်းများတည်ရှိသည်စေရန်လည်းကစားမျှော်မှန်းချက်တက်ထားရန်. …
Water And Wastewater Treatment Plant And System Operators Job Description / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့ Duty နမူနာ
Function or controlawhole process-or method of machines, often through the use of manage boards, handle or to transfer water or wastewater. Career Skills Need Incorporate substances, such as for instance ammonia, chlorine, or lime, to deodorize and sanitize water along with other drinks. Operate and modify controls on …
စာရေးယောဘကိုဖျေါပွခကျြ File / ခံမှုနမူနာပြီးတော့ဂျော့ဘ်
စံချိန်ဥပဒေကြမ်းများ, ကတ်များ, ငွေတောင်းခံလွှာများ, ဆက်သွယ်ရေး, နှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များသင်္ချာသို့မဟုတ်အက္ခရာစဉ်ဝယ်ယူဒါမှမဟုတ်အလုပ်ဟာအပြောင်းအလဲနဲ့ technique ကိုနှင့်အညီ. လိုအပ်တဲ့အခါမှာနေရာချထားခြင်းနှင့်အစီရင်ခံစာထံမှပစ္စည်းဥစ္စာကိုဖယ်ရှား,. Job Skills Qualification Add new substance to file data or produce fresh records as needed. Monitor resources taken off information to …
စာရွက်သတ္တုအလုပ်သမားများကယောဘဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့် Duty နမူနာ
စုဝေး, ကျယ်ပြန့်, နှင့်စာရွက်-သတ္တုပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများကိုပြုပြင်, ထိုကဲ့သို့သော drainpipes အဖြစ်, bins စီမံခန့်ခွဲ, လိုင်းများ, နှင့် case. Perform နောက်တစ်နေ့မဆိုပါဝင်သည်စေခြင်းငှါ,: ဖြတ်ဖို့ fabricating မော်ဒယ်များထူထောင်နှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်, တိုးချဲ့, နှင့် sheetmetal တိုးချဲ့; ပေကျော်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသတ္တု, လုပ်ကွက်, မျိုးသုံးပြီးသို့မဟုတ်မျိုး; operating soldering and welding gear to become …
Tool And Die Makers Job Description / တာဝန်နမူနာပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
Examine specifications, match and construct, put up and perform device tools, and layout metal share areas to produce and fix dead, chopping tools, jigs, fittings, ညွှန်ကိန်းများ, and I hand tools. Career Skills Need Research programs, features to prepare series regarding fabricating methods of businesses, စတိုင်များ, or drawings, သေ, သို့မဟုတ် devices များ. …
ဂိမ်းကစားခြင်းကားအရောင်းယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
Run စားပွဲပေါ်မှာလှုပ်ရှားမှုများ. သည်းခံရ၏သို့မဟုတ်အခြားလောင်းကစားကိရိယာများအလုပ်လုပ်နေဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏စားပွဲခုံနှင့်အလုပ်လှုပ်ရှားမှုများနောက်ကွယ်မှဆက်လက်တည်ရှိ, သို့မဟုတ်လူတွေကိုတားဆီးသို့မဟုတ်ကတ်များများ၏မှန်ကန်သောအရေအတွက်ကို dispensing. အမြတ်အစွန်းဖြန့်ဝေသို့မဟုတ်ကစားသမားစုဆောင်း’ ပိုက်ဆံ. peopleA လက်ချောင်းဆန့်ကျင် houseis သည်စွန်ပလွံအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ပါစေ. Job Skills Requirement Change report currency for …
Neurodiagnostic နည်းပညာရှင်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို
Carryout electroneurodiagnostic (အဆုံး) electroencephalograms အပါအဝင်စမ်းသပ်မှု, အလားအလာ evoked, polysomnograms, သို့မဟုတ် electronystagmograms. အာရုံကြော conduction သုတေသနမေလတွင်အားဖြင့်ဖျော်ဖြေကြသည်. အလုပ်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက် Connect ကိုကော်လျှောက်ထားဖောက်သည်. ဦးနှောက်အာရုံကြောဖြစ်ကြောင်းစနစ်ကပြဿနာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဆရာဝန်များကိုကူညီနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပြန်သုံးသပ်ပါ, သို့မဟုတ်စိတ်ကို, အိပ်. ဥပမာအား electroencephalography အဘို့စမ်းသပ်သို့မဟုတ်အစီရင်ခံစာများ Perform (EEG), …
Private Detectives And Investigators Job Description / တာဝန် Template ပြီးတော့ Functions များ
စု, ခန့်မှန်း, compile and report information regarding agencies or folks to consumers, or identify situations of infractions or outlawed functions of principles in personal establishment. Job Skills Prerequisite Create reports or scenario summaries to report inspections. Seek public record information, credit reports, pc sources, duty or legitimate filings even to …
Barbers Job Description / တာဝန်နမူနာပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
Heat Treating Equipment Setters, အော်ပရေတာ, နု, သတ္တုနှင့်ပလတ်စတစ်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Obligation Sample and Functions Put up , လုပ်ဆောင်, or tend heating equipment, such as for instance heat-treating flames, furnaces -hardening machines, induction machines sets -treat cheap or material items. Career Skills Requirement Read generation times and work …
စာမျက်နှာ 30 ၏ 56« ပဌမ...1020«2829303132 » 4050...နောက်ဆုံး »